Fiilmiin Ajaa’iba jedhamu Gurraandhala 2015 bayuuf jira - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Bashannana Fiilmiin Ajaa’iba jedhamu Gurraandhala 2015 bayuuf jira
Gama guddina aartii Afaan Oromootiin wontoonni gaggaarii fi kanneen nama abdachiisan hedduun mudhataa jiru. Barreeffamaa fi sirbaan alatti, hojiin fiilmii Afaan Oromoo bara kana boqonnaa haarawa waan seene fakkaata. Tankaarfii gaariidha, Artistoota keennan.
Bara kana artistoonni fi daayrektaroonni Oromoo heeduun, kanneen biyyaa fi biyyaan ala jiraatan, hujii fiilmii qopheessu irratti bobba’anii fiilmii gaggaarii, ergaa fi woraabbiinis, ta’an ummata biraan gayaa jiru. Kanneen sarara irra jiran, ammo, heddu fakkaatu. Ishoo!
Keeyriyaat Yuusufiin kan barreeffame fiilmiin Asaantii Sadaasaa 15 eebbifame. Yeroo gabaabaa keessatti ija ummataa bira nigaya jedhameeti kan dubbatamu.
Fiilmiin Ajaa’ibaa, bifuma wolfakkaatuun, yeroo gababaa kessatti ummataaan wolarguuf deema. Fiilmiin Ajaa’iba woggaa dhufu gara jalqabaatti, Gurraandhala keessa, ummata bira nigaya jedhameeti kan abdatamu.
Barreessitoonniifi daayrektaroonni fiilmii kanaa Saamson Maarqoosii fi Guutamaa Buttaa ta’uun beekameera. Hiree gaarii artistoota keennaaf.
fiilmii afaan oromoo
Previous articleFiilmiin Asaantii Sadaasaa 15 Minisootatti Eebbifame
Next articlePaaspoortiin keessan hagam humnaqabeessa?
Awash Post Nov 23, 2014 At 12:44 am
artii afaan oromo jabeysuun dirqamaa oromummaatti